ग्रीन लाइफको पहिलो कारोवार कतिमा होला ? - नेपालबहस
ग्रीन लाइफको पहिलो कारोवार कतिमा होला ?
| ७:२५:२३ मा प्रकाशित
०१ चैत, काठमाडौं । ग्रीनलाइफ हाइड्रोपावर कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको शेयर डिम्याटमा आएको छ । बिहिबारबाट सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले कम्पनीको शेयर डिम्याट खातामा पठाउन थालेको हो।
सिडिएससीले कम्पनीको शेयरलाई जिएलएच कारोबार संकेतमा मेरो शेयरमा पठाएको छ । नेप्सेले कम्पनीको शेयर शुक्रबार सूचिकृत गरेको छ । आज शेयर नेप्सेमा सूचीकृत संगै आइतबारदेखि दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न सकिनेछ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रतिशेयर नेटवर्थ ९९ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। नेप्सेले नेटवर्थको तीन गुणासम्म ओपनिङ्ग रेञ्ज तोक्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार न्यूनतम ९९ रुपैयाँदेखि २९८ रुपैयाँसम्म पहिलो कारोबार खुल्न सक्ने देखिन्छ।
बुधवार यी चार कम्पनीको शेयरमूल्यमा सकारात्मक सर्किट, प्रतिशेयरमूल्य कति ? १ हप्ता पहिले
रुरुको आईपीओमा प्रिमियम तिर्दा पनि ९७ प्रतिशतले आवेदकले शेयर नपाउने संभावना १ हप्ता पहिले
निफ्रासहित यी कम्पनीको शेयरमा झुम्मिए खरिदकर्ता, कुनको शेयरमा कति माग ? १ हप्ता पहिले
यी कम्पनीको शेयर खरिद गर्न लाग्यो लगानीकर्ताको भिड ! १ हप्ता पहिले
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्सको संस्थापक शेयर लिलामीमा १ हप्ता पहिले
ओली र ठाकुरबीच भेटवार्ता ३७ मिनेट पहिले
ओली सरकारको बहिर्गमन र लोकतन्त्रको संरक्षण ४९ मिनेट पहिले
जिल्ला अस्पतालको आइसीयू अझै सञ्चालनमा आएन ७ घण्टा पहिले
नयाँ वर्ष २०७८को अवसरमा स्मार्टडोको ५ दिने अफर सार्वजनिक २ दिन पहिले
होली मेलामा दुई समूहबीच झडप हुँदा दुई जनाको मृत्यु २ हप्ता पहिले
आमा कहाँ खोजुमा बाल कलाकार नेरेश्का स्थापित १ महिना पहिले
आज विवाह पञ्चमी, श्रीरामचन्द्र र सीताको पूजा आराधना गरी देशभर मनाइँदै ४ महिना पहिले
हिन्दु विश्वविद्यालय खोल्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष २ महिना पहिले